एकमुखे रुद्राक्ष र हनुमाने सिक्का देख्ने बितिकै पनि हाम्रो भाग्य बद्लिने छ, हेला नगरी सेयर गरौं नत्र अनिष्ट होला | सुदुरपश्चिम खबर
एकमुखे रुद्राक्ष र हनुमाने सिक्का देख्ने बितिकै पनि हाम्रो भाग्य बद्लिने छ, हेला नगरी सेयर गरौं नत्र अनिष्ट होला
पुस ४, २०७७
कमलेश घरडीको-‘लेट इट गो’
चर्चित गाइका एलिना चौहान र कलाकार एन.डी. ठकुरीको “पियारी पियारी परेवा जोडी “गीत बजारमा आउदै !
फाल्गुन १०, २०७७
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलिङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिंगलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन । आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्रमबाट बच्नुहोस्ः लिंगको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ । शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ । पुरुष लिंगको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ । यसैगरी स्त्रीलिंगको अर्थ स्त्रीको प्रतीक भन्ने हुन्छ । र नपुसंक लिंगको अर्थ नपुसंकको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
आखिर के हो त शिवलिंग ? शुन्य, आकाश, अनन्त, ब्रह्माण्ड र निराकार परमपुरुष भएकाले यसलाई लिंग भनिएको हो । स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिंग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिंग हो । शिवलिंगको अर्थ अनन्त हुन्छ । अर्थात यसको कुनै सुरुवात पनि हुन्न र अन्त पनि । शिवलिंगको अर्थ लिंग वा योनी होइन । वास्तवममा यस्तो ब्याख्या दिगभ्रमित गर्नका लागि अंग्रेजहरुले गरेका हुन् । हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले शिवलिंगको अभिप्राय चिन्ह, निशानी, गुण, ब्यवहार वा प्रतीक हो । धर्ती यसको पिठ्यु र आधार हो ।
१) सोमबार साँझ सूर्यास्तपछि शिवको पुजा गर्नु विशेष महत्व मानिन्छ। किनकी सूर्यास्त हुनेवित्तिकै प्रदोष काल सुरु हुने गर्दछ।
२) दिन र रातको बीचको समयलाई सन्धि काल भन्ने गरिन्छ। शिव पुराणका अनुसार अनुसार यो समय शिवजी प्रसन्न मुद्रामा रहने गर्दछन्। त्यसैले यो समयमा शिवको पुजा गर्दा भगवान चाडै प्रसन्न हुने गर्दछन्।
यसरी गर्नुहोस् विशेष पुजा: शिव मन्दिरमा गएर शिवलिंगमा दिप बाल्नुहोस् र ऊँ सांब सदा शिवाय नमः मन्त्रको जप १०८ पटक गर्नुहोस्। यसका लागि रुद्राक्षको माला प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। शुद्ध जलमा गंगाजल र दूध मिलाएर शिव लिंगमा चढाउनुहोस्। जल चढाउने समय ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुहोस्।
त्यसपछि भगवानलाई चन्दन चढाउनुहोस्। बेलपत्र, धतुरो पनि शिव लिंगमा चढाउनुहोस्। यसरी भगवानलाई पुजा सामाग्री चढाएपछि ओम नमः शिवाय मन्त्रको १०८ पटक जप गर्नुहोस्। त्यसपछि भगवानलाई मिठाइ चढाएर भक्तजनलाई बाढ्नुहोस्।
घरडी कमलेशको-दुखेसो !
फाल्गुन ९, २०७७
चर्चित कलाकार शिशिर योगीको प्रेरणादायी गीत ‘तिमी हिँडे बाटो बन्छ’ !
फाल्गुन ७, २०७७
विवाहपछि महिलाको पेट नघटनुका करणहरू ?
फाल्गुन ५, २०७७
न हिँड्नलाई खुट्टा छ ,न बोल्न जिब्रो चल्छ , बाँसबाट बनाउँछन् अदभुत कलाकृति ! सम्मान स्वरुप सेयर गरौं !
फेरि बढ्यो निर्माण सामग्रीको मूल्य, कुनको कति पुग्यो ?
ट्याक्टर दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
बैतडीमा गाईलाई गोठमा बाँधने बेला हान्दा एक महिलाको मृत्यु !
माघ १७, २०७७
बैतडीमा विद्यालय गएकी १७ बर्षीया किशोरी हत्या गरि फालिएको अवस्थामा फेला !
भागरथीको शव आज दाहसंस्कार गरिदैँ : गोठलापानी बजार देखि सेरासम्म शवयात्रा निकालिने !
दिनेश भट्टका बुबाले गरे भागरथी भट्टको हत्या भएको दिन बारे यस्तो खुलाशा !
फाल्गुन ८, २०७७
दोगडाकेदारमा गुपचुप भएका ५ वटा हत्याका घटनाहरु !
फाल्गुन ३, २०७७
आखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? यस्तो छ कारण !!
फाल्गुन १३, २०७७
बैतडीमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा बढ्दै !!
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने : ओलीका प्रेस सल्लाहकार
नयाँ सरकार गठन गर्न सजिलो छैन
डडेल्धुराको अजयमेरू स्थित विकट क्षेत्र बिजुल सडक सञ्जालसँग जोडियो !